Gaming – Tagged "Gaming Monitors" – ICT.com.mm
GIGABYTE G27F Gaming MonitorK557,000
GIGABYTE AORUS FI27Q Gaming MonitorK1,161,000
ViewSonic 27-Inch 165Hz QHD Curved Gaming Monitor VX2718-2KPC-MHDK643,000
ViewSonic 27-Inch 144Hz Gaming Monitor VX2758-P-MHDK478,000
Samsung 32-Inch Odyssey G7 Gaming Monitor (LC32G75TQSE)-9K1,456,057
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Panel Size (diagonal): 27” IPS Display Viewing Area (HxV): 597.6 x 336.15 (mm) Panel Backlight/ Type: Edge type Color Saturation: 95% DCI-P3 / 125% sRGB True Resolution:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Panel Size (diagonal): 27" Display Viewing Area (HxV): 596.736 x 335.664 (mm) Panel Backlight/ Type: ELED / IPS Display Surface(non-glare/ glare): Non-glare Color Saturation: 95% of DCI-P3...
ViewSonic 27-Inch 165Hz QHD Curved Gaming Monitor VX2718-2KPC-MHD
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 27" 165Hz Adaptive Sync: Yes Resolution: 2560 × 1440 (QHD) Viewable Area (in.): 27 Dynamic Contrast Ratio: 80,000,000:1 Static Contrast Ratio: 4,000:1 (typ) Viewing Angles:...
ViewSonic 27-Inch 144Hz Gaming Monitor VX2758-P-MHD
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 27" 144Hz Adaptive Sync: FreeSync Resolution: 1920 × 1080 Full HD Viewable Area (in.): 27 Dynamic Contrast Ratio: 80,000,000:1 Static Contrast Ratio: 1,000:1 (typ) Viewing...
Samsung 32-Inch Odyssey G7 Gaming Monitor (LC32G75TQSE)-9
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 32" [Gaming Monitor] Resolution: 2560 x 1440 [WQHD] Response Time: 1ms(GTG) Refresh Rate: 240Hz Brightness: 350cd/m2 Contrast Ratio: 2,500:1 Panel: VA 178°/178° Connector: HDMI x...
Samsung 27-Inch Odyssey G7 Gaming Monitor (LC27G75TQSE)-9
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 27" [Gaming Monitor] Resolution: 2560 x 1440 [WQHD] Response Time: 1ms(GTG) Refresh Rate: 240Hz Brightness: 350cd/m2 Contrast Ratio: 2,500:1 Panel: VA 178°/178° Connector: HDMI x...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 23.5" Resolution: 1920 x 1080 [Full HD] Screen Ratio: 16:9 Response Time: 4ms (GTG) Refresh Rate: 144Hz Brightness: 250cd/m2 Contrast Ratio: 3,000:1 Panel: VA 178◦...
Lenovo G24-10 23.6-inch FHD WLED Gaming Monitor-10
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display: 23.6"FHD 300nits 144 Hz Resolution: 1920 x 1080 Contrast Ratio: 1000:1 / AMD Free Sync technology Color Coverage: 72% NTSC Color Support: 16.7 Million Connection Type: 1...
Acer Gaming Monitors NITRO VG0 (VG240Y)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Resolution: 1920x1080 @144Hz AMD Free SyncDisplay Size: 23.8" Brightness: 250 cd/m2 ( HDR ) Ready Technolagy Contrast: 100000000: 1 Max ( ACM ) Response Time: 1ms (...
AOC Gaming Monitor AG273FXR (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: AG273FXR Panel: 27" (IPS) Pixel Pitch (mm): 0.3114 (H) x 0.3114 (V) Effective Viewing Area (mm): 597.888 (H) x 336.312 (V) Brightness: 250 cd/m² Contrast Ratio:...
BenQ MOBIUZ EX2510 1ms IPS 144Hz 24.5 inch Gaming Monitor
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 24.5-INCH DISPLAY: 144Hz refresh rate 1ms MPRT IPS gaming monitor with 1920 x 1080 Full HD resolution and FreeSync Premium for smooth gameplay IMAGE OPTIMIZATION: BenQ HDRi...
BenQ ZOWIE XL2746S 240Hz DyAc+ 27 inch Esports Gaming Monitor
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LCD size (inch)‎: 27 Aspect ratio‎: 16:9 Max. resolution (PC/Laptop): 1920 x 1080 at 240Hz (HDMI 2.0, DP)‎‎‎‎ Refresh rate: 240Hz Display area: 597.6 x 336.15 Pixel...
BenQ ZOWIE XL2720 144Hz 27 inch Esports Gaming Monitor
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LCD size (inch)‎: 27 Aspect ratio‎: 16:9 Max. resolution (PC/Laptop): 1920 x 1080 at 144Hz (DVI-DL, DP) Display area: 597.60 x 336.15 Pixel pitch (mm): 0.311 Typ....
BenQ ZOWIE XL2546K 240Hz DyAc+ 24.5 inch Esports Gaming Monitor
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LCD size (inch)‎: 24.5 Aspect ratio‎: 16:9 Max. resolution (PC/Laptop): 1920 x 1080 at 240Hz (HDMI 2.0, DP)‎‎‎‎ Display area: 543.744 x 302.616 Pixel pitch (mm): 0.283...
ASUS VG249Q Gaming Monitor
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Panel Size (inch) : 23.8 Aspect Ratio : 16:9 Display Viewing Area (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Display Surface : Non-Glare Backlight Type :...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen size (inch): 23.8 inch Resolution: 1920x1080 Refresh rate: 144Hz Response time (GtG): 1 ms Panel Type: VA Brightness (typical): 350 Sync Technology: FreeSync Premium Backlight: WLED...
Dell Gaming Monitor SE2417HGX-2
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Resolution: 1920 x 1080 (60Hz) Contrast Ratio: 1,000:1 Display Size: 23.6″ Full HD Response Time:2ms (GTG) Connector:2x HDMI, DP 1.2, Audio, USB...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model name: 24G2E Panel: 23.8" (IPS) Pixel Pitch (mm): 0.2745 (H) x 0.2745 (V) Effective Viewing Area (mm): 527.04 (H) x 296.46 (V) Brightness (typical): 250 cd/m²...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: AOC Colour: Black Screen Resolution: 1920 x 1080 Contrast (dynamic): 20M:1 Refresh Rate: 144Hz Display Size: 27″ Response Time: 1 ms IPS Technology G-Sync Compatible VESA...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LCD size (inch)‎: 24″ Aspect ratio‎: 16:9 Max. resolution: 1920 x 1080 at 144Hz (DVI-DL, DP) Typ. brightness (cd/㎡)‎: 350 Typ. contrast ‎: 1000:1 Typ. DCR (DyNamic...
Aorus KD25F Gaming Monitor-1
24. 5” 1920×1080 FHD Display witha240Hz refresh rate, 0. 5ms response time, and free Sync support World’s First Tactical Display with Active Noise Cancellation (ANC) Exclusive AORUS Features...
LG Gaming Monitor 24GL600F (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LG Colour: Black Display Size: 23.6″ Resolution: 1920 x 1080 Contrast ratio: 1000:1 Response Time: 1ms(144Hz) Connector: HDMI(2), Display Port Item Code: PP0080008 Geared Up for...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Size: 24.5″ FHD (TN Panel) Item Code: PP0020015 Adaptive-Sync Technology: NVIDIA G-SYNC Screen Resolution: 1920×1080 Contrast Ratio: 1000:1 (typical) Response Time: 1 ms Connector: HDMI, Display...
Dell Gaming Monitor SE2417HGX-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: PP0020013 Screen Resolution: 1920 x 1080 (60Hz) Contrast Ratio: 1,000:1 Display Size: 23.6″ Full HD Response Time:2ms (GTG) Connector:2x HDMI, DP...